श्रीमतीलाई बि’ग्रीन नदिन ध्यान दिनुस यी कुराहरुमा: विवाहितले पढ्नै पर्ने ! – AB Sansar
November 1, 2020 adminLeaveaComment on श्रीमतीलाई बि’ग्रीन नदिन ध्यान दिनुस यी कुराहरुमा: विवाहितले पढ्नै पर्ने !
श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु दुई जनाकै भूमीका महत्वपुर्ण हुन्छ । दुईजनाले नै एक अर्कामा विश्वासका साथ अघि बढ्ने हो भने सम्बन्ध बलियो बनाउन सकिन्छ । यहाँ हामीले यस्ता केही उपाय उल्लेख गरेका छौं जहाँ श्रीमान र श्रीमतीबीचको मतमुटाव साम्य हुनसक्छ । अनि सुमधुर र आत्मिय सम्बन्ध विस्तार हुनसक्छ । यो तपाईंका लागि पनि उपयोगी छ कि ? **** यो समाचार को पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ****
– यदि तपाईंलाई श्रीमतीमाथि शंका छ भने श्रीमितीलाई फ्री नछोड्नुहोस् । श्रीमतीका हरेक भनाइमा विशेष ध्यान दिनुहोस् । अनावश्यक खाली समय भयो भने पनि श्रीमितीहरुको मन बहकिन सक्छ त्यसैले श्रीमतीलाई व्यस्त राख्नुहोस् ताकी उनले दिमागमा नानाथरी कुरा खेल्न नपाओस् ।
– श्रीमती के गर्दै छिन्, कहाँ जाँदै छिन् किन जाँदै छिन्, को सँग जाँदैछिन् भन्ने जस्ता कुरामा विचार पुर्‍याउनुस् । तपाईंले आफ्नो श्रीमतीलाई धेरै माया गर्छु भन्दैमा अन्धभक्त भएर विश्वास गर्नु पनि ठीक हुँदैन । यसको मतलव धेरै शंका गर्नु पनि राम्रो होइन । सकेसम्म श्रीमतीलाई घरमा एक्लै नछाड्नुहोस् । यति तपाईं वैदेशिक रोजगारी या बाहिर कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने श्रीमतीलाई घरपरिवारसँगै राख्नुहोस् ।
– तपाईको फोनको श्रीमतीले कस्तो रेस्पोन्स गर्छिन् । त्यसप्रति पनि तपाई सचेत हुनुपर्छ । तपाईले फोन गर्दा उनले तरिकाले बोलेकी छिन् ? बोल्दा बोल्दै एकासी झर्किने, रिसाउने गर्छिन् भने पनि शंका गर्ने ठाउँ उत्पन्न हुन्छ । कहिलेकाहीं श्रीमतीलाई अभावमा पनि बाँच्न सिकाउनुहोस् । तर, त्यसो भन्दैमा धेरै कष्ट भने दिनुहुँदै । धेरै माया गरेर सबै पैसा श्रीमतीलाई नै पठाउनुहुन्छ त्यसको हिसाब किताब केही राख्नुहुन्न माग्नुहुन्न भने कहिलेकाहीं त्यो पैसा गलत काममा पनि प्रयोग हुन सक्छ ।**** यो समाचार को पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ****
पब्जीको लत, विवाहमै बेहुलीलाई भुलेर खेलमा व्यस्त (भिडियो
हे दैव ! किन यस्तो जन्म दियौ नी यी नाबलकलाई; जन्म जात नै दुवै हात छैन (मन थामेर भिडियो हेर्नुस्)